कसरी यात्रा सुरक्षित Coronavirus फैलन समयमा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कसरी यात्रा सुरक्षित Coronavirus फैलन समयमा
को Coronavirus फैलन संसारभरिका मानिसहरूलाई चासो को एक विशाल कारण छ, तर सायद सबैभन्दा ठूलो मुद्दा को एक कि सामना यात्री छ. यात्रा योजनामा ​​गाह्रो किनभने परिवर्तन गर्न र टिकट अक्सर पहिले नै बुक, तपाईं रद्द आफ्नो योजना जारी गर्न लागि सट्टा यसलाई थप अर्थमा बनाउन सक्छ. तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने, यी सुझावहरू फाइदा लिन तपाईं Coronavirus फैलन समयमा सुरक्षित यात्रा पक्का गर्नुहोस् र प्राप्त गर्न सबै Corona नवीनतम अद्यावधिक.
Coronavirus के हो?
पहिलो, ठ्याक्कै Coronavirus छ के? यसलाई मध्य पूर्व सर्जिकल सिंड्रोम जस्ता श्वसन रोगहरूबाट comprises कि भाइरस को एक तनाव छ (MERS) र गम्भीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (सार्स). यो वर्षको उपन्यास Coronavirus COVID-19 termed छ र मुख्य भूमि चीन को हुबेई प्रान्तको उत्पत्ति छन् विश्वास गरिन्छ, वुहान शहर मा. यो संग चिसो-जस्तो लक्षण अत्यधिक संक्रामक रोग छ, सहित ज्वरो, दुखेको घाँटी, खोकी, र एक रूघाँ. यो पहिलो जनवरी मा पहिचान गर्न आए देखि, रोग एशिया को धेरै र दुनिया को बाकी फैले छ, यस्तो जापान रूपमा प्रभावित देशहरूमा, दक्षिण कोरिया, इटाली, संयुक्त राज्य अमेरिका, र इरान. यो धेरै स्थानहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध वा यात्रा परामर्शका परिणाम छ, हुनत धेरै यात्रा को लागि अझै पनि कारगर छन्.
कसरी यात्रा सुरक्षित Coronavirus फैलन समयमा?
While the Centers for Disease Control and Prevention (सीडीसी) सबै भन्दा अत्यधिक प्रभावित ती देशहरूमा nonessential यात्रा विरुद्ध चेतावनी दिए छ, संसारको धेरै सीमित देखेर छ, कुनै पनि अवस्थामा भने. को विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महामारी भन्दा COVID-19 एक अन्तर्राष्ट्रिय को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन चासो ठानेको छ, भन्नाले तपाईंले ती यात्रा योजनामा ​​यदि तपाईं हुनुहुन्छ होसियार साथ मा राख्न सक्नुहुन्छ. बस यी सुझावहरू प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य कायम राख्न अतिरिक्त हेरचाह:
सुझाव 1: तपाईंको सबै खोपहरु प्राप्त
यो स्पष्ट छ, लाग्न सक्छ, यसलाई आफ्नो यात्रा सुरु गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो सबै सुइहरु भयो भनेर पक्का गर्न महत्त्वपूर्ण. बाहिर पत्ता लगाएर तपाईं जाने अघि तपाईं आवश्यक के शट, स्वास्थ्य जानकारी को लागि सीडीसी वेबसाइटमा जाँच. बनाउने पक्का सकेसम्म धेरै रोकथाम रोगहरूबाट रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो राखन गर्न महत्वपूर्ण छ.
सुझाव 2: Disinfecting पोंछे ल्याउन
सबैभन्दा खराब फैलने केही नजिक सम्पर्क संग स्थानहरूमा देख्यो गएको छ, यस्तो जापान मा quarantined हीरा राजकुमारी क्रूज जहाज रूपमा, जो टोक्यो को बस बाहिर स्थिर रहलपहल. तपाईं पनि धेरै अन्य यात्रु बीच यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक विमान मा जस्तै, आफ्नो क्षेत्र सफा राख्न निश्चित हुन. ल्याउन र जीवाणुरोधी पोंछे र तपाईं आइपुग्दा तपाईंको क्षेत्रमा सफा. यो तपाईंको armrests wiping समावेश, cupholders, ट्रे टेबल र तपाईं कब्जा गरिने कुनै पनि क्षेत्र.
सुझाव 3: सुरक्षित Coronavirus फैलन समयमा तपाईं यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको हात सफा राख्न
जबकि धेरै मान्छे अनुहार मास्क मार्फत भाइरस स्पष्ट हुनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, वास्तविकता मा, डाक्टर फेला ती तपाईंलाई स्वस्थ राख्न केही सानो के. सट्टा, हात धुने अक्सर सबैभन्दा प्रभावकारी हुन पाइन्छ स्वस्थ रहन. तपाईं कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने जहाँ तपाईं प्राय आफ्नो हात धुन गर्न सक्षम हुनेछ, बरु हात प्रक्षालक ल्याउन र बारम्बार प्रयोग.
यो नै नस मा, आफ्नो हात आफ्नो अनुहार बन्द राख्न, र आफ्नो मुख र आँखा बाट टाढा. These are the higher risk areas for you to get an infection.
सुझाव 4: यात्रा बीमा प्राप्त
तपाईं हुनुहुन्छ भने अमेरिकी आधारित, क्रेडिट कार्ड को प्रशस्त निर्मित प्रदान यात्रा बीमा, नयाँ Coronavirus फैलन ढाकिएको छ भने हेर्न तपाईंको कार्ड जारीकर्तालाई संग जाँच गर्न आवश्यक छ यद्यपि. सबैलाई अरू लागि, तथापि, भाइरस को पुष्टि अवस्थामा अप popping र यात्रा को आफ्नो देशमा फैलँदै सुरु यदि तपाईं खरीद यात्रा बीमा गर्न आवश्यक छ.
यो टिप पनि फिर्ता यात्रा गर्न को विस्तार, यस्तो रेल टिकट रूपमा, होटल, र पर्यटन. जबकि यो पुस्तक थप अग्रिमसँग खर्च हुन सक्छ, फिर्ता यात्रा योजनामा ​​भएको लचीलापन रद्द को मामला मा बन्द ठूलो भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ.
सुझाव 5: भीडहरू टाढा रहन!
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिए गरेको समुदाय सम्पर्क मार्फत भाइरस सर्छ, भन्नाले तपाईं सकेसम्म भीड स्थानबाट टाढा रहनु पर्छ. यो बिरामी मानिसहरूलाई आफ्नो जोखिम minimizes. को पाठ्यक्रम, पर्यटक आकर्षण भीडलाई आकर्षित गर्छन गर्छन्, तर तपाईं अझै पनि सक्षम हुनुपर्छ बन्द-शिखर अवधि समयमा यात्रा जब आगंतुकों कम छन्. यस्तो पेरिस रूपमा ठाउँहरू, यो खोल्ने संग्रहालय मा Louvre भ्रमण वा अघि दिनको बीचमा सट्टा नजिक अर्थ हुन सक्छ जब पर्यटक यातायात चुचुराहरूको.
को पाठ्यक्रम, यो सम्पूर्ण भीडले बच्न असम्भव हुन सक्छ, विशेष गरी मा चाडहरूमा. जबकि यस्तो इटाली गरेको Carnivale र स्पेन मा पनि मोबाइल विश्व कांग्रेस एक्सपो युरोप को धेरै लगातार रद्द गरेको छ चाडहरूमा.
सुझाव 6: आफ्नो ख्याल गर्नु
यात्रा व्यस्त छ, हामी सबै जान्दछन् कि. तथापि, यात्रा को उच्च गतिको गो प्रकृति तपाईं आफैलाई र्याग्ड चलाउन आवश्यक मतलब छैन. यो सुरुतिर को दरार मा उठाउनका लागि अपिल ध्वनि र विगतका मध्यरात सम्म बाहिर टाउको सक्छ, तर यो गर्न महत्त्वपूर्ण तपाईं सबै रमाइलो amidst आफैलाई हेरचाह. किन? पर्याप्त निद्रा र एक स्वस्थ आहार मतलब किनभने तपाईंको शरीर रोगहरूबाट विरुद्ध नै रक्षा गर्न सक्छन्. यो रोग बढी susceptible निम्ति विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै वृद्ध वा ती संग comprised प्रतिरक्षा प्रणाली रूपमा.
द Coronavirus फैलन समयमा सुरक्षित यात्रा – तल रेखा
त्यहाँ पक्कै पनि यो समयमा यात्रा बुक भएकाहरूलाई लागि चासो हुँदा, त्यहाँ तपाईं Coronavirus फैलन समयमा सुरक्षित यात्रा गर्न को लागि तरिकाहरू छन्. को COVID-19 संक्रामक, तर धेरै देशहरूमा अझै प्रभावित छैन र अझै पनि यात्रा को लागि सुरक्षित छन्. तपाईं जारी मा योजना भने आफ्नो छुट्टी, आफैलाई स्वस्थ राख्न यी सुझावहरू प्रयोग. पक्का पर्याप्त सुत्न र राम्रो खाना बनाउन, सबै आफ्नो आवश्यक सुइहरु प्राप्त, निस्संक्रामक तपाईंलाई आसपास क्षेत्रमा सफा, र आफ्नो यात्रा योजनामा ​​लचिलो राख्न. खरीद यात्रा बीमा र जोगिन सकेसम्म क्षेत्रमा भीड, र सबै माथि सजग राख्न. राखन आफैलाई साँच्चै Coronavirus को मामला मा तयार फैलने आफ्नो देशमा पप अप.
को coronavirus फैलन समयमा सुरक्षित यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक रेल मार्फत छ – रेल र प्रयोग द्वारा परिभ्रमण को सुविधा र सुरक्षा आनन्द एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “कसरी यात्रा सुरक्षित Coronavirus फैलन समयमा?” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
रेल यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा स्पेन, रेल यात्रा स्विट्जरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप